Hery - Tsiky dia ampy | Janoary 2010
Inona foana ity perquisitions ity?
2010-01-14 @ 08:11 in Ankapobeny
Elaela indray izay tsy nanaovako resaka politika izay. Ka hofohazina kely sao matoritory.
Araka ireny hita tamin'ny vaovao antsary ireny dia nosavaina koa ny teny amin'ny trano fonenan'i Ravalomanana omaly. Miaramila amin'ny kamiao mihitsy no tonga teny. Tamin'ny voalohany dia saika tonga dia hiditra tsy nisy mandat, fa nony tonga ny mpisolo vava ny tompon-trano vao lasa indray aloha naka mandat... dia nolazaina hoe ao no miafina izany Radio pirate izany ka hisava.
Ny vokany moa dia tsy nisy na inona na inona (indray) tao, ary niaiky mihitsy ilay minisitra Nathalie Rabe hoe tsy nisy zavatra hita tao dia notohizany hoe ... angamba efa nalaindry zareo tamin'ilay fotoana nandehanana naka mandat (lolll) dia hoe misy lala-miafina ao ka mety nivoaka tany amin'ilay lala-miafina ny olona nitondra an'ilay emetteur.
Zavatra roa ihany no azo lazaina.
Na dia tena "donto" mihitsy ny mpitondra (mety ho izany tokoa aloha), na nisy fikafika maizimaizina tao fa mody notakonana tamin'ny hoe perquisitions.
- Tena donto ve ny HAT?
Raha tadidintsika dia tsy voalohany no misy fahadontoana (absurdité na stupidité) tahaka izao rehefa misy resaka perquisitions. Imbetsaka ny FIS no nanao perquisitions fa naheno hoe misy fitaovam-piadiana etsy na aroa (tadidy ilay teny Ivato? teny @ magazay TIKO?) Ny olona donto ihany no mino hoe raha hanao trafika-na fitaovam-piadiana dia ao amin'ny magazain'ny TIKO no hametrahana azy. Toa izany koa, ny donto ihany no mino hoe mpanohitra HAT manao radio piraty dia ao Faravohitra ao amin'ny tranon-dRavalomanana no hanaovany azy. Satria fantatra fa raha misy ny oaraoara dia ao no hosavaina voalohany. Ka mety hoe donto tokoa ve ny HAT?
- Sao dia fikafika maizina kosa?
Ny ahiahy tsy ihavanana. Raha toa ka tsy donto ary ny HAT nisava tao dia inona no mety ho antony? Sao dia mba...? Sao dia mba...? Ny krizy hono mahalava tanana (ohabolana nandritra ny fotoan'ny HAT io), ka mety hoe fomba iray handrobàna tranon'olona indray ve? Akaiky ny fifidianana, ka mety hoe fomba iray hijerena indray hoe misy osy mainty (sisa nanamborana) indray ve tao? Sa ve efa ho tapitra ny HAT ka jerena ihany sao dia tokony mamono trasy aloha mba tsy handehanana eny Tsiafahy raha sendra mivadika ny kodiarantsarety? Sa ve hoe sao niverina tsimoramora tao Ravalo? lolll
Dia tsy haiko ry zareo fa raha olona normal dia tsy tokony ho nisy akory iny perquisition iny raha toa ka ilay hoe "Hijery fa sao dia ao ilay Radio pirate" no tanjona.Saingy tsy hay intsony moa fa efa krizy izao ka rehefa tsy voa ny kibo dia voa ny saina...